Sina 11.6 INCH Bus overhead Rooferan'ny efijery fanaraha-maso ny rafitra fialamboly horonantsary tv monitor factory sy mpanamboatra | Yunting
Ny XO Vision GX2155 9 Flip-Down Multimedia Player miaraka amin'ny Controll USB / SD no mpiara-miombon'antoka tonga lafatra amin'ny fiara sy ny dia an-dàlana - sady fohy no lava. Ilay mpilalao haino aman-jery TFT LCD ambony loha dia mihantona mora foana amin'ny fiaranao hanomezana fialamboly ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Miaraka amin'ny mpampita haino aman-jery sy hazavana dome, ity mpilalao ity dia manatsara ny fiaranao ho any amin'ny ambaratonga manaraka. Mazava sy miloko manjelanjelatra ambiny manazava jiro 16 loko safidy. Volavola vaovao sy miharo, mety amin'ny maodelin'ny fiara maro. Ny bokotra famaranana fanaraha-maso lavitra dia mora mifidy izay tianao. Izy io dia mamadika ny hetsiky ny habakabakao amin'ny rivotra ho lasa famindra toerana marina eo amin'ny efijery. Hanome anao ny fivezivezena milamina sy fifehezana tonga lafatra ho an'ny zavatra ilainao! Ampifanaraho amin'ny fialam-boly fiara ny anao manontolo amin'ny fametrahana mora. Manisa isa isa-minitra mandritra ny dia. Tafiditra ao anaty boaty- 9 Flip-Down Player, Remote Control, Cable, Warranty Card, User Manual.
* Overhead TFT LCD Multimedia Player
* Fanaraha-maso USB SD
* Transmitter namboarina
* Jiro Dome namboarina
* Rafitra Android miaraka amin'ny CPU Octa-Core
* WiFi namboarina
* Horonan-tsary HDR10 + / 8K
* UI vaovao rehetra manome aingam-panahy ny artista
* Feo ambony
* Fomba maro
* Fifandraisana isan-karazany
* Fanandramana fijerena mbola tsy nisy toa azy
* Ny faharanitan-tsaina ao ambadik'ilay fanandramana mbola tsy nisy toa azy
* Module WiFi namboarina, Haingam-pandeha haingana kokoa
* Fizarana Internet 3G / 4G
* Votoatin'ny efijery misimisy kokoa, mazava kokoa - HDR10 + Teknolojia, Lahatsary fanohanana 8K, 180 ° zoro fahitana
* Buttons Touch Virtual
* Ireo mpandahateny mahery vaika namboarina, feo avo lenta na aiza na aiza
* Fahafinaretana akaiky indrindra sy horonan-tsary sy horonan-tsary
* Fifandraisana marobe amin'ny fitaovana rehetra
* Fitaratra fitaratra
* Betsaka ny interface interface sy extensions, ao anatin'izany ny HDMI, USB, AV IN ary FM / IR
* Volavolan-tarehy aestetika, ahazoana aina ary azo antoka ao amin'ny antsipiriany
* Jiro Aura miloko, fanaraha-maso jiro mandeha ho azy
Mba hiantohana ny fahamarinan-toerana amin'ny rafitra, ny lohan'ny laser, ny solomaso, ny motera ary ny fanamafisam-peo dia marika malaza toa an'i Sony, Panasonic, HITACHI; Fanehoana LCD: LCD tany am-boalohany tsy misy teboka na teboka maty; Fitsinjaram-pahefana: hahazoana antoka fa mifandray tsara ny FPC. Fanaraha-maso kalitao: fitsapana vokatra efa vita vita, alohan'ny hodorana, aorian'ny fahaterahana, QC, QA, fanaraha-maso ny ozinina. Fitsapana: fahatairana, mari-pana ambony, mari-pana ambany, fidinana sns .
Teo aloha: 12 INCHBus car screen monitor HD vaovao super Slim 19.5 santimetatra Android atsipazo ambany fanaraha-maso bu
Manaraka: 13.3 INCH Car tafo HD monitor (DVD player Roof mount anaty fiara)
Ny valin-drakitry ny fiara mifono lcd Tv
Fanaraha-maso ny valiny TV Monitor
Fanaraha-maso fiara 12 INCHBus fiara HD vaovao somary manify ...